Qalabka - Dongguan Weldo saxitaanka machining Co., Ltd.
Gudaha 10-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan soo uruuriney khibrad badan oo xirfadeed. Qalabka dhirta oo dhameystiran, tikniyoolajiyadda shaqaalaha heerka koowaad, khibrad maamul oo hodan ah. Waxaan ku siin karnaa qaybo sax ah oo tayo sare leh macaamiisha. Weligeen waan ku faannay.
Qiyaas ahaan, waxaan ka horreysiineynaa tayada wax soo saarka. Shaqaale kasta, xiriiriye kasta, geeddi-socod kasta iyo habraac kasta waxaa taageera qalabka. Waxaan soo saarnaa tikniyoolajiyad tayo sare leh. Ku guuleysta tayada.
Marka la fiiriyo cabirka, waxaan fiiro gaar ah siineynaa xiriir kasta oo adeeg ah.
Kormeerayaasha tayada waxay si joogto ah u hubiyaan alaabtayada si loo hubiyo heerka iyo tayada wax soo saarka. Waxaan haysan doonaa qalab loogu talagalay dib u eegista qaybaha, si ay alaab-qeybiyeyaashu u leeyihiin sumcad aad u wanaagsan iyo diiwaanno tayo sare leh sannado badan.
Tababaruhu wuxuu si joogto ah u siiyaa tababar farsamo iyo jawaabo shaqaalaha farsamada, wuxuu hagaajiyaa aqoonta xirfadeed ee shaqaalaha, wuxuuna diiradda saaraa howlaha hawlgalka, si loo hagaajiyo tayada khadka wax soo saarka oo loo sameeyo qaybo sax ah oo tayo sare leh.
Makaanik wuxuu leeyahay khibrad farsamo oo hodan ah. Waxay si joogto ah u hubin doonaan qalabka wax soo saarka si loo hubiyo in xasilloonida ay u socoto mishiinadu.
Waaxyada hogaaminaya khibradooda xirfadeed ee hodanka ah waxay ku hogaaminayaan cabbir si ay u soo saaraan tiro qaybo sax ah oo tayo sare leh.
Waxaan rajeyneynaa inaan aadno adduunka, adduunku ha arko waxyaabahayaga tayada sare leh oo aan adeegsano wax soo saarkeena. Abuur qiimo badan adiga.